Maalinta xoriyadda Catalonia oo dad intii hore ka yar ay u soo baxeen - BBC News Somali
Maalinta xoriyadda Catalonia oo dad intii hore ka yar ay u soo baxeen
Dadka u soo baxay dabaaldaggan
Dad lagu qiyaasay 600,000 oo ruux ayaa isugu soo baxay magaalada Barcelona si ay taageero ugu muujiyaan maalinta xoriyadda Catalonia oo Arbacadii ku aadanayd, sida ay booliisku sheegeen, wuxuu ahaa mid ka mid ah isu soo bixii ugu dad yaraada marka la fiiriyo siddeedii sano ee la qabanayay xuskan sannad laha ah.
The Diada ayaa ah sannadguurada maalintii ay magaaladu gacanta u gashay ciidammadii Spain sannadkii 1714.
Balse magaalada Barcelona ayaa maalintan isu soo bax u samaynaysay tan iyo sannadkii 2012, si ay taageero ugu muujiyaan in Catalonia ay ka xorowda Spain inteeda kale.
Dad milyan ku dhaw ayaa waddooyinka isugu soo baxay xilligan oo kale sannadkii 2018, arrintaas oo ka dhigan in hoos u dhac badan uu jiro.
Xuska sannadkan ayaa imaanaya toddobaadyo uun ka hor marka la ridayo xukunka 12 siyaasi oo gooni ugoosadka raba, kuwaas oo loo haysto kaalintii ay ku lahaayeen codayntii xorniyadda ee la mamnuucay sannadkii 2017.
Catalonia ayaa xoriyad ku dhawaaqday toddobaadyo ka dib markii la qabtay afti, Spain ayaa markaas ka dib ku dhawaaqday in ay toos u maamuli doonto gobolkii maamul hoosaadka lahaa.
Haddii siyaasiyiintaas lagu helo dacwadaha lagu soo oogay ee fallaaganimada iyo khayaanada waxay wajihi karaan 25 sano oo xabsi ah.
Kumannaan ruux oo funaanado buluug ah qaba ayaa mudaaharaad dhigay Arbacadii iyaga oo dalbanaya in la sii daayo hoogaamiyeyaasha gooni u goosadka.
Dibad baxyadan intooda badan waxay ahaayeen kuwo nabdoon, inkastoo qaar ka mid ah mudaaharaadayaasha ay waxyaabo kala duwan ku tuureen booliiska rabshadaha ka hortaga, ka dib markii isku dhacyo ka dhaceen baarlamaanka Catalonia.
Madaxweynihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont ayaa Spain ka cararay ka dib aftidii dhacday sannadkii 2017, haddana wuxuu ku sugan yahay Belgium.
Spain ayaa ka laabatay waraaq lagu soo qabanayo oo ay jartay bishii Juunyo, waraaqdaas ayaa lagu soo xiri lahaa Carles iyo shan ruux oo kaaliyeyaashiisa ahaa, balse dacwadda ka dhanka ah ayaa wali furan, arrintaas ayaa ka dhigan in lixdoodaba la xiri doono haddii ay laabtaan.